Izitayile zeenwele zamadoda aneetikiti | Amadoda aQinisekileyo
Kukho amadoda amaninzi anamava okudodobala komgca wokukhula kweenwele xa sele ekhulile (ngumcimbi wemfuza), ovelisa odumileyo amathikiti. Ukuba le yimeko yakho, uya konwaba xa usazi ukuba kukho iinwele ezinomtsalane kumadoda angenisiweyo.
Isihloko kweli nqaku ungabona umfanekiso weqonga UAlexander Skarsgard ('Igazi lokwenyani'). Ukuba ujonga ngokusondeleyo, kwicala lasekhohlo uyabona ukuba umgca wokukhula kweenwele zakhe wehlile, kodwa oko akukuthinteli iSweden ekubeni inxibe iinwele ezinomona. Ubuqhetseba bakhe kukunxiba umphezulu ngaphezulu kakhulu kunabanye. Oku kukuvumela ukuba ugqume ukungena (nangona ungakhange udlule ngaphezulu) kunye nemisonto ngaphambili kwaye, ukongeza, yenza inkohliso yokuba kukho iinwele ezininzi kunokuba zikhona.
Inwele ka-Alexander Skarsgard isebenza kuwo omabini amadoda ane inwele ezingqalile (ayilunganga) njengabo banamaqhakuva. Kuya kujongeka ngcono ukuba unomgca womhlathi ophawulwe kakuhle (khumbula ukuba amadoda anobuso obude kufuneka avumele amacala akhule ngakumbi), nangona inyani kukuba isebenza kakuhle nazo zonke iintlobo zobuso.
UJustin Theroux (Iqabane langoku likaJennifer Aniston) ngomnye umzekelo wamadoda anamatikiti. Kwimeko yakho, ubheja ngokungazami ukufihla okucacileyo. Umdlali weqonga ulityhila ngokupheleleyo ibunzi lakhe, ucheba iinwele zakhe okanye uzikama ngqo emva. Ubuqhetseba bakhe kukusebenzisa iimveliso ezinganeli nje ukuzilinganisela iinwele, kodwa zikwanike ivolumu engaphezulu kunokuba inazo. Kwaye siyasithanda isiphumo, ewe kuyanceda ukuba nomtya wokukhula oqinileyo nangona ubuye umva kakhulu kunye nethoni efanayo yolusu ebusweni.
Ukuba uyindoda ehlehlayo kwaye ufuna ukujongwa nguJustin Theroux, kuqala qiniseka ukuba iinwele zakho zilungile okanye zi-wavy (ngapha koko unokuhlala uphumile). Emva koko yibambe ishampu zepolymer yohlobo lwe-L'Oreal Professionnel EXPERT VOLUMETRY yohlobo. Nje ukuba uhlanjwe, yome ngesomisi ngelixa uqhuba ikama kwicala elime nkqo. Ukugqiba, sebenzisa i-wax ekhanyayo okanye ijeli, uzama ukugcina umthamo owenziwe yishampu kunye nendlela yokomisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iinwele ezimangalisayo zamadoda abuyela umva
Isebenza njani imoto elanga?